နတ်မောက်-ပျော်ဘွယ် ကားလမ်းတွင် ယာဉ်တစ်စီး ကားဘီးပေါက်ကာ အရှိန်မထိန်းနိုင်ဘဲ တိမ်းမှောက်၊ ?? - Yangon Media Group
နတ်မောက်၊ ဒီဇင်ဘာ ၃
မကွေးတိုင်းဒေသကြီး နတ်မောက်မြို့နယ် နတ်မောက်-ပျော်ဘွယ်ကားလမ်းတွင် မော်တော်ယာဉ်တစ်စီး ကားဘီးပေါက်ကာအရှိန်မထိန်းနိုင်ဘဲ ပြွန်တံတားအုတ်ခုံကိုဝင်ရောက် တိုက်မိပြီးတိမ်းမှောက်ရာမှ ယာဉ် ပေါ်ပါသူ ၁၆ ဦး ပြင်းထန်စွာဒဏ် ရာရရှိကြောင်း နတ်မောက်မြို့နယ် ရဲစခန်းမှ သိရသည်။
ဖြစ်စဉ်မှာ နတ်မောက်မြို့နယ် ဂွေးချိုကျေးရွာအုပ်စု ဖုန်ကုန်းကျေးရွာနေ မိုးမင်းအသက်(၂၇)နှစ် မောင်းနှင်လာသော ၉ဋ္ဌ/—– ဖောကားအပြာရောင်(ယာဉ်လိုင်စင်စိစစ်ဆဲ)သည် ဒီဇင်ဘာ ၂ ရက် မွန်းလွဲ ၁ နာရီ မိနစ် ၂ဝ ခန့်က နတ်မောက်မြို့ မြို့မဈေးကြီးမှ ဈေးဝယ်ကုန်ပစ္စည်းများနှင့် ခရီးသည်များသယ်ဆောင်လာပြီး နတ်မောက်-ပျော်ဘွယ်ကားလမ်းအတိုင်းမောင်းနှင်လာစဉ် နတ် မောက်မြို့နယ် စည်သာအုပ်စု ရွှေ ညောင်ပင်စားသောက်ဆိုင်အနီး မိုင်တိုင်အမှတ် ၅၈/၅ နှင့် ၅၈/၆ အကြားအရောက်တွင် ဝဲဘက်ရှေ့ ဘီးပေါက်ကာ အရှိန်မထိန်းနိုင်ဘဲ ကားလမ်းဝဲဘက်သုံးပေခန့်အကွာမှ ပြွန်တံတားအုတ်ခုံကိုဝင်ရောက် တိုက်မိပြီးတိမ်းမှောက်သွားရာမှ ယာဉ်ပေါ်ပါသူ ၁၆ ဦး ဒဏ်ရာ ရရှိခဲ့ကြသဖြင့် နတ်မောက်ဆေးရုံသို့ပို့ဆောင်ခဲ့သည်။
ယာဉ်တိမ်းမှောက်မှုကြောင့် ဒဏ်ရာရရှိသူများမှ ဂွေးချိုကျေး ရွာအုပ်စု ဖုန်ကုန်းကျေးရွာမှ မောင်စိုးအောင်(၁၂)နှစ်၊ ဦးအောင်ဝင်းနိုင်(၅ဝ)နှစ်၊ ဒေါ်သန်းရီ(၅၃) နှစ်နှင့် ဦးအောင်စိန်မြင့်(၆၄)နှစ်တို့မှာစိုးရိမ်ရသဖြင့် နတ်မောက် ဆေးရုံမှ မကွေးဆေးရုံသို့လွှဲပြောင်းခဲ့ရကြောင်းသိရသည်။ ဖြစ်စဉ်နှင့်ပတ်သက်၍ ယာဉ် မောင်းမိုးမင်းကို နတ်မောက် ရဲစခန်းမှ ယာဉ်(ပ) ၆၁/၂ဝ၁၇ ရာဇသတ် ကြီးပုဒ်မ ၃၃၈/၃၃၇/ ၂ဝ၂ ဖြင့် အမှုဖွင့်အရေးယူဆောင်ရွက်ထား ကြောင်းသိရသည်။
Mandalay Bike Week 2017 ပွဲသို့ မြန်မာနိုင်ငံ မြို့ပေါင်း ၇ဝ ကျော်မှ ဆိုင်ကယ်ချစ်သူများ၏ ဆိုင်ကယ်အစီး ၁ဝဝ??
တောင်ကိုရီးယား ကမ်းလွန်တွင် ငါးဖမ်းလှေနှင့် ကုန်သင်္ဘော တိုက်မိ၊ ၁၃ ဦးသေ နှစ်ဦးပျောက်ဆုံ?
စင်ပေါ်တွင် ဒူးတုန်နေဆဲဖြစ်သော လီယမ်ပိန်း
ကမ္ဘာ့အမွေအနှစ် စာရင်းဝင် သရေခေတ္တရာမှ နှစ် ၁၅ဝဝ သက်တမ်းရှိ လေးမျက်နှာ ဘုရားအဖောက်ခံရခြင်းအ??
မြန်မာ့ ငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ် ရပ်တန့်နေဟု UPDJC နိုင်ငံရေးပါတီများ အစုအဖွဲ့ အတွင်းရေးမှူး ဆို
”ဇာတ်ကားတွေကို အရှုံးခံပြီး ရိုက်ကူးရမယ်၊ အခုချိန်မှာ ငွေကို မျှော်လင့်ရင် အရူးဖြစ်သွားမယ်’